Khadka Dhexe ee Caawinta | Martech Zone
Saturday, May 5, 2007 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Weligaa ma isweydiineysaa sidee bay ahayd u ​​noqoshada kalkaaliye kalkaaliye ku soo noqda waqtiyadii dhexe? Hagaag, wicitaankii waa laga jawaabay muuqaalkan cajiibka ah ee qosolka badanina wuxuu muujinayaa sida laga yaabo inuu ahaa.
Tags: -CSRtaageero macaamiishawakiilka taageerada macaamiishahelpdeskDhexdhexaad
? hal shay oo aanan fileynin inaan ku arko balooggaaga ayaa ahaa sawir Norway ah.
Lol & isbuuc dhammaad wanaagsan!
Waxaad sharad, foo! Waxay ahayd mid aad u qosol badan inaan la wadaagin!